SHINTSHA INANI LEZINSUKU ZOKUBUYISELWA EMUVA WINDOWS 10 UKUTHUTHUKISWA KWESICI - I-WINDOWS 10
Shintsha inani lezinsuku zokubuyiselwa emuva Windows 10 ukuthuthukiswa kwesici
Uma uthuthukela kusuka enguqulweni yangaphambilini ye Windows 10 uye kunguqulo yakamuva ye-1903 Windows 10 uhlelo lugcina ikhophi yenguqulo yangaphambilini ye-Windows ukuze abasebenzisi bakwazi ukubuyela emuva kunguqulo yangaphambilini uma behlangabezana nezinkinga ngenguqulo entsha sha. Ngokuzenzakalelayo izilungiselelo, Windows 10 ikuvumela ukuthi buyela kunguqulo yangaphambilini yeWindows ezinsukwini eziyishumi zokuqala. Futhi ngemuva kwalolo hlelo susa ngokuzenzakalela le folda endala ye-windows, futhi awukwazi ukubuyela emuva kokwakha okwedlule windows 10. Kepha uma ufisa nweba umkhawulo we-10days nge-tweak elula ungashintsha inani lezinsuku zokubuyela emuva Windows 10 ukuthuthukiswa kwesici.
Okuqukethwe umbukiso 1 Ungasandisa kanjani isikhathi ukuze ukhiphe a Windows 10 thuthukisa ezimbili Ungabuyisa kanjani emuva windows 10 buyekeza 1903
Qaphela: kufanele wenze izinyathelo ezingezansi (ukushintsha inani lezinsuku zokubuyiselwa emuva Windows 10 ukwenziwa ngcono kwesici) zingakapheli izinsuku eziyi-10 ngemuva kokuthuthukela ku-windows 10 Okthoba 2018 ukubuyekeza.
Ungasandisa kanjani isikhathi ukuze ukhiphe a Windows 10 thuthukisa
IMicrosoft iveze ukuthi uhlelo lweDISM olusebenzayo khipha izinketho zomugqa womyalo ku- Iwebhusayithi kaMicrosoft's Doc, lokho kunikeza umsebenzisi amandla okwenza lokhu:
Thola ukuthi zingaki izinsuku ngemuva kokuthuthuka lapho i-OS ingakhishwa khona.
Setha inani lezinsuku umsebenzisi okufanele akhiphe ngazo ukuthuthuka kweWindows.
Futhi ukwenza lokhu, mane uvule umyalo we-oda ngamalungelo okuphatha bese uthayipha umyalo I-DISM / Online / Get-OSUninstallWindow ezibonisa isikhathi sokubuyela emuva samanje ngezinsuku.
windows 10 dala umsebenzisi ngaphandle kwe-imeyili
Manje thayipha umyalo I-DISM / Online / Setha-OSUninstallWindow / Inani: 30 , ukuguqula isikhathi sokubuyela emuva. Lapha Inani: 30 kusho ukuthi uzokwazi ukubuyela emuva kunguqulo yangaphambilini ye-Windows kufika ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokufakwa kwenguqulo entsha. Futhi, ungashintsha i-Value: 60 ukunweba isikhathi sokubuyisela emuva izinsuku ezingama-60.
Ithiphu: Ungaguqula inani liye ezinsukwini ezingama-60 njengoba iWindows izogcina amafayela wenguqulo edlule yohlelo lokusebenza kudivayisi yesikhathi esikhethiwe kuphela.
QAPHELA: Uma uthola ' Iphutha: 3. Isistimu ayikwazi ukuthola indlela ecacisiwe ”, Kungenzeka ngoba ayikho inguqulo yangaphambilini yamafayela e-Windows kwi-PC yakho. Njengoba sishilo ngaphambili kufanele wenze lo myalo kungakapheli izinsuku eziyi-10 ze Windows 10 Thuthukisa.
Yilokho kuphela onakho ngempumelelo Shintsha inani lezinsuku zokubuyisela emuva Windows 10 ukuthuthukiswa kwesici. Ukuhlola nokuqinisekisa umyalo wohlobo olufanayo I-DISM / Online / Get-OSUninstallWindow
Ungabuyisa kanjani emuva windows 10 buyekeza 1903
noma kunini lapho uzizwa umusha Windows 10 inguqulo ayikulungele noma ukuthola Inkinga ongayisebenzisa Buyela emuva kunguqulo yangaphambilini ulandela izinyathelo ezingezansi.
Cindezela isinqamuleli sekhibhodi yeWindows + I ukuvula uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo,
Chofoza ukuvuselela nokuphepha bese uthola kabusha
Manje chofoza ukubuyela enguqulweni edlule ku khipha amawindi 10 bese ubuyela emuva windows 10 ukubuyekeza kwe-2019.
Futhi, funda ukuthi ungalungisa kanjani Izinhlelo Zokugcina Ezilahlekile ngemuva Windows 10 Okthoba 2018 Buyekeza inguqulo 1809.
umshayeli irq angalingani kancane
ikhompyutha iqhubeka nokunqamula kumawindi e-wifi 10
ukwedlula eqandisiwe indlela yokonga
ungayenza kanjani i-google chrome ivule ngokushesha
yini uhlelo lokusebenza lokusingathwa kwezilungiselelo ze-radeon
usebenzisa i-usb drive njengenqama
isibuyekezo sesici ku- windows 10 inguqulo 1809 yehlulekile ukufaka